SOOMAALIDA AUSTRALIA IYO DAAFAHA DUNIDA
Soomali badan ayaa dibada u soo qaxday in badan oo kamid ah waxa ay hoy kadhigteen wadamada waqooyiga Ameerika (north America), iyo Europe( Yurub) ayada oo ladhi karo Soomaalida dibada u soo habqantay waxay ubadan yihiin labadaas qaaradood. laakiin markaad fiirisid daafaha kale ee dunida ayana waxaa jiro Soomali kunool gaar ahaan Wadanka Australia, iyo wadanka NewZealand. Laakiin xaalada iyo arimaha soomaalida kunool labadaas wadan waxaad moodaa inay dhinacyo badan uga duwantahay gaar ahaan Soomaalida kunool dibada gaar ahaan Yurub iyo Ameerika.
Inbadan oo Soomaali ah ayaa maalinba maalinta kadanbeeysa kasoo tagayo wadankoodii hooyo ayaga oo leh raadsada noolal kawanaagsan mida aad kujirtaan taasoo ay baahidu ukeenayso inay sameeyaan waxwalba oo u suurta galinayo inuu gaadho meesha uu hiigsanayay. "Tusaale u soo qaado wadada u dhexaysa Liibiya iyo Itaaliya" [tilmaan waxaa kuugu filan Soomaalida katagayso liibiya ee u socoto talyaaniga], laakiin siday talyaaniga kugaadhaan.? marka ay noqoto wadankan Australia ama imaanshihiisa waa arin aad u adag oo runtii lagala kulmo dhibaato
1- LABA WADDO. "Two way"
A- Waxaa lagu yimaadaa wadanka Ausralia labawado mida koobaad inay qaraabo kuu joogta wadanka oo ayaga ay masuul kaanoqdaan sidaasna aad ku imaato.
B- Inaad soomartid wadada dheer oo looyaqaan qaxootimo oo ay hayada qaxootida ay masuul kaanoqoto oo aad saas kutimaatid. labadaas wado ayaa badanaa wadanka lagu yimaadaa Soomalida joogtana ay kuyimaadeen badankood. Majiraa wada sedexaad? taa soo aan ugala jeedo si kale oo lagu soo gali karo majiraa, jawaabtu waa maya inbadan oo magangalyo raadis ah ayaa kuyimd wadanaka Australia ayaga oo ka soo galay kuna soo galay si sharci daro ah xaga bada soona maray wadamada dariska la ah.
Australia waxa ay go aan adag ka qaadatay in aynan u aqoon sanayn inuu yahay qof qaxooti ah qofka si sharci dara ku soo gala wadankeeda taas oo dharbaaxo kunoqotay dad badan oo u badnaa wadamada Iran, Iraq, Afghanistan, Turks, iyo wadamo kale in ay waayeen xuquuqdii qaxootinimo markii ay wadanka kuyimaadeen si sharci dara ah. Doowlada Australia waxa ay cadeeysay oo ay tidhi" Qofkii doonayo magan galyo ha soo maro albaabka saxda ah laakiin qaxootimo ayaan doonayaa albaabka danbana waan kasoo galayaa mid aan aqbalanayo ma aha". waa sida ay udhigneeyd warbixin ay bixisay hayada socdaalka wadanka Australia.
2-SOOMAALIDA KUNOOL AUSTRALIA.
Marka laga hadlayo soomalida kunool wadanka Australia waxaad moodaa in ay taariikhdoodu ku biya shubanayso dad wadanka yimid kabacdi markii dagaalkii sokeeya dhacay Soomaaliya. Laakiin waxaa jira Soomali wadankan Australia kunooleed intii ay jirtay daladii Soomaaliyeed ama doowladii soomaaliyeed dadkaas oo wadanka kuyid ardaynimo iyo siyaabo kale taariikhdu markay ahaayeen dabayaaqadii 1980-maadkii. Laakiin Tirada soomaalida iyo jiritaankooda waxa ay muuqatay ama soo baxday kabacdi dagaalkii sokeeya. Soomali badan ayaa wadanka Australia kunool in kasta oo tira koob rasmi ah uuna jirin laakiin waa tiro dadku ay is dhaafsadaan ama aad kamaqlayso marka ay sheekaysanayaan "Ilaa Toban kun" Soomaida wadanka Australia kunool waxa ay dagaan ahaan ubadan yihiin gobalka layidhaahdo (VICTORIA) Magaalada (MELBOURNE), sidoo kale waxay ubadan yihiin oo ay kunool yihiin gobalka la yidhaahdo (NEW SOUTH WALES) magaalada (SYDNEY). Iyo xaga galbeedka Gobalka layidhaaddo (WESTERN AUSTRALIA) Magaalada (PERTH).
3- MAXAY QABTAAN BADANKOODU? WAASE SIDEE INTA KALE?
Soomalida kunool wadanka Australia marka ay noqoto xaga shaqada waxaa ay kamuuqdaan goobaha laga ijaarto tagaasida taasoo aan ula jeedo ragga waxa ay ubadan yihiin dad wado ama raacdeeyo shaqadiisuna ay yahay TAXI-WADE (TAXI DRIVER), wadida taksiga oo ah shaqo rasmi u ah soomalida ayaga oo mudo dheerba kushaqeeynayay ilaa ay hada ugudbeen in ay isu badalaan dad yeesha tagaasi oo ay xaaladu marayso hadii aad shaqo rabto ama in aad wado (TAXI) meeshii aad ka aadi lahayd qof ajnabi ah oo aad gaadhigiisa ka ijraaran lahayd aad heli kartid qof soomaali ah oo gaadhi leh oo aad ka ijaaran kartid luqadaadana kugula hadloyo oo aad si wanaagsan ula tacaamuli kartiin.
Dhinaca kale tiro aan badnayn ayaa uleexatay xaga waxbarashada oo namberkiisu aad u heeseeyo taas oo marka la iswaydiiyay ay noqotay jawaabtu qofka waqti uu wax kubarto mahelayo haduu taxsi fuulo iyo dhinaca kale qof kuleh " Aniga ayaa reerkaanagii u soobaxay marka xaga waxbarasho niyad u mahayo ilaa mar kale" si walba ha ahaatee soomaalida kunool wadankan Australia waxaay lawadaagaan wadama dibada cabsi soo waajahday waalidiinta iyo inta wax dhashay ayaga oo aad marwalba kadareemaysid in ay u cabsanayaan ubadkooda iyo meesha ay joogaan oo kuleh "Ilmihii in ay iga halaabaan ayaan ka cabsanayaa" taa soo ay dhacday in lahelo ubad badan oo duurka galay kabacdi markii lawaayay xidhiidh adag oo kadhaxeeya qoyska [familka] ama tarbiyadii ilmaha.
4-WAA TEE CAASIMADA WADANKA AUSTRALIA?
Su'aashaan oo jawaabteeda ula jeedo in badan oo soomaali ah ayaa marka ay maqlaan Australia waxaa maskaxdooda ku soodhacayso in caasimada wadankaas ay tahay (SYDNEY) laakiin jawaabtu ayna saas ahayn ee sidni waa magaalada magaalo ama xaga dadbadnaan ugu dadbadan ee caasimada wadanka waa magaalo layidhaahdo KANBERA (Canberra) oo ah magaalo yar. Soomalida wadanka dagan waa jiraa inbadan oo dhaqankoodii iyo diinkoodii kudhagan laakiin tiro aan aad ubadnayn ayaa ay hawadu qaaday.
5- JAALIYADDA SOOMAALIDA [SOMALIAN COMMUNITY].
Waxa ay soomaalia kunool wadankan Australia ay leeyihiin, sida soomalida kale ee dibada, ururo kuwaas oo isku magacaabay in ay u adeegaan dadkooda baahida jirtana daboolaan laakiin waxay noqdeen geed qaba yaro ah ee lagu dhuftay ul caanihiisuna qofkii ay gaadheena indha beel uu noqday. Mid walba asaga ayaa goonidiisa u taagan inuu yahay dalada ama meesha kaliye ee lagala soo xadhiidhayo arimaha soomaalida, in kastoo rajo wanaagsan ay muuqato hada lana rajaynayo in ay midoobaan, oo bahween noqdaan camuunitiyada kajira wadanka.
6- RAJADA IYO MUSTAQBALKA.
Inbadan oo Soomaali ah oo kunool wadanka ayaa raja kunool ah ayaga oo maalin walba rajeeynayo in ay arkaan doowlada Soomaliyeed oo kadhalata wadankoodii taas oo u xaqiijisa waxa ay waligood kuriyaaqayeen, meesha ay hada kunool yihiina ay tahay meel kumeel gaadh ah dadka fikradaas aamisan waa dada waa wayn. Laakiin in badan ayaa waxbana kala socon waxa kadhacayo wadankoodii hooyo ayaga oo aad moodid in ay noolashooda kusalaynayaan sidii ay ugu noolaan lahaayeen halkan noloshooda oo dhan, taasoo qaarkood ay dantu usuurta galisay inay gataan guryo qaarkoodna bilaabeen inay ganacsadaan.
Dhinac walba ka eeg waxaa meesha ku jira in wadankaaga hooyo lagama maar maan yahay, noolasha aad ku haysatid wadankaaga hooyo in ayna lamid ahayn mida aad kuheshay wadan kale. waxaa ama aan isugu jirno mid yimid hada ama mid marhore yimid ama mid imaan doona inwadankeenii soomaliya, caradeenii soomaaliya, ay laga maarmaan ahayn.
Qore: Mohamed Wali(xiish)